इरान विमान दुर्घटनाः इरानी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट युक्रेनी विमान खसेको प्रमाण भेटिएको पश्चिमा देशको दाबी - नवयुग
विमानमा को थिए?
तेहरानबाट किएभका लागि उडेको युक्रेन इन्टर्न्याश्नल एअरलाइन्सको विमान ७५२ मा चालकदका सदस्यसहित कुल १७६ जना थिए। अधिकांश यात्रु इरान र क्यानडाका थिए। मृतकमध्ये १५ जना बालबालिका थिए।
तेहरानस्थित युक्रेनी दूतावासले पहिला विमानको इन्जिनमा समस्या देखिएको बताएको थियो।
तर छानबिन हुनुभन्दा अघि विमान दुर्घटनाको कारणबारे व्यक्त टिप्पणी आधिकारिक नभएको भन्दै उसले त्यो भनाइ फिर्ता लियो।
छानबिनको औपचारिक प्रतिवेदन नआएसम्म दुर्घटनाको कारणबारे अनुमान नगर्न युक्रेनी राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका छन्।
इरानी सञ्चारमाध्यमले प्राविधिक कारणले विमान दुर्घटनामा परेको भन्दै एक अधिकारीलाई उद्धृत गरेका छन्।
मेहर समाचारसंस्थाका अनुसार इरानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखले “आतङ्कवाद” को भूमिका नभएको जनाएका छन्।
दुई देशबीच तनाव चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला इरानले अमेरिकी सेनालाई आतङ्ककारी घोषणा गरेको छ।
मध्यविन्दु सास्कृतिक तथा नेवा: खाना महाेत्सवकाे तयारी तीब्र
Prevपृथ्वीनारायण शाह: मृत्युको कारण ‘बाघको आक्रमण’ कि रोग?
Nextप्रदेश ३ को नाम वाग्मती,राख्ने प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत